DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Isniinta maanta ah 2 Sebtember 2019 - Afrika - TELES RELAY
ACCUEIL » DIB U EEGID AFRICAN PRESS »DRC: Faallooyinka saxaafadda Shiinaha ee Isniinta maanta ah 2 Sebtember 2019 - Afrika
DRC: Faallooyinka saxaafadda Shiinaha ee Isniinta maanta ah 2 Sebtember 2019 - Afrika
- Warka ku jira saxaafadda Shiinaha ayaa weli xukuma mowduucyo dhowr ah, oo ay ku jiraan golihii ugu horreeyay ee wasiirrada xilligiisii ​​ee uu Madaxa Dowladdu hoggaamin doono iyo barnaamijka dowladda Sylvestre Ilunga. Laakiin mowduuca fadeexada galmada gelineysa mas'uuliyiinta maamulka-Kongo Central ee Kongo ayaa sidoo kale lagu casuumay dib-u-eegistaas.
"Madaxa Xukuumadda ayaa gudoomiya Golaha Wasiirrada". Waa kan cinwaanka ay hay'addu bixiso ee ay hay'addu ku bixiso gudbinta Isniinta.
Madaxa Dawladdu wuxuu gudoomiye u yahay Golaha Wasiirrada, Golaha ugu horreeya ee Golaha Wasiirrada ee xukuumaddii ugu horreysay ee shanta sano ee Madaxa Dowladdu waxaa la qabanayaa Isniinta 2 Sebtember 2019, isaga oo hoggaamin doona.
Sida laga soo xigtay ilo ku dhow dhow madaxweynaha Felix-Antoine Tshisekedi waxay ka faa iideysan doontaa fursadda ay kaga faalloonayso farshaxanka ugu weyn ee barnaamijka Ra'isalwasaaraha loogu yeeray inuu soo bandhigo oo uu difaaco Talaadada 03 Sebtember ka hor kalfadhiga Golaha Shacbiga, oo hadda ku jira kalfadhi aan caadi ahayn, iyada oo la eegayo furitaankiisii.
AVENIR waxay daneyneysaa "Soo bandhigida barnaamijka iyo maalgalinta dowladda: usbuuca ugu muhiimsan", cinwaanka. Kadib magacaabista xubnaha kale ee dowlada Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ee uu soo saaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda, subaxa Isniinta ee 26 August 2019, wuxuu daboolka ka qaadayaa soo bandhigida dowladda Golaha Shacbiga, ka hor furitaanka midkan. Dhanka kale, heerka aqalka hoose ee baarlamaanka, ansaxinta awoodaha, qodobka koowaad ee ay sameeyeen kalfadhiga aan caadiga aheyn ee la isugu yimid codsiga Madaxweynaha, laga bilaabo Isniinta 19 Agoosto ilaa Sabtida 07 Sebtember 2019, ayaa la faaruqiyey.
Isla xididdada, FORUM DES AS ayaa tiriyey: "Barnaamijka Ilunkamba, horeyba waddada ayuu ugu jiray! ". Tan iyo Sabtida, inta badan dadka reer Kongareeska ayaa horay u og waxa ay Raiisul Wasaaraha Sylvestre Ilunga Ilunkamba ka hor sheegi doonaan kuxigeenada qaranka. Si kale haddii loo dhigo, wadada Kinshasa waxay leedahay mudnaanta barnaamijka caleema saarka ee dowladda, xitaa kahor intaysan helin aqonyahanada xubnaha ka ah aqalka hoose ee baarlamaanka, ayuu ku qoray maqaalkiisa cinwaankiisu.
KHUDBADDA qaybteeda cinwaankeedu yahay: "Berrito waxaa laga filaa Golaha Qaranka: Barnaamijka Dowladda: Sylvestre Ilunga Ilunkamba waxaa soo foodsaaraya xaalado badan oo deg deg ah! ".
Loogu talo galay tabintaan, waxay ku qasban tahay inay ku noolaato sida dadku filayaan. Raiisel wasaare Sylvestre Ilunga ayaa khudbad muhiim ah u jeedin doonta wakiilo ka socda Dowlada Jamhuuriyadda, wakiilo talaadada 3 Sebtember 2019, iyadoo la sugayo warmurtiyeedka rasmiga ah ee aqalka hoose.
Waxay, mabda ahaan, soo qaadan doontaa dhammaan walaacyada waaweyn ee reer Kongo waxayna dabcan soo jeedin doontaa xalka suurtagalka ah ee xallinta. Tani waa marxaladi ugu dambaysay ee dejinta kahor bilowga shaqo dhab ah ee isku-dubaridka sharci dejinta iyo fulinta, kuwaas oo jilayaashoodu ay ku soo duuleen qiiro bilowgii. Waxay haystaan ​​kaliya 4 sano oo hartay iyo 4 bilood inay ka jawaabaan caqabadaha dib-u-dhiska iyo horumarka dalka. Markaa waxaay ku dhamaatay balanqaadyadii hawada iyo hadalada dheer, waa inaan hada qancinaa.
Ku saabsan fadeexadda galmada oo maskaxda gelineysa mas'uuliyiinta siyaasadeed iyo maamulka ee Kongo, "Waxay la noqotey kalsoonidii ay ku qabeen maamulka gobolka Kongo Central: Ganacsiga Mimi Muyita: FCC wuxuu marayaa marxaladaha". Kani waa cinwaanka FORUM DES AS.
Gudiga ayaa sheegay in: FCC ay ka laabatay kalsoonidii ay ku qabeen gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka Kongo Central, Atou Matubuana iyo Justin Luemba, kadib fadeexad dhanka galmada ah. Muuqaalka mega oo uu bilaabay Joseph Kabila ayaa bayaankan soo saaray kadib kulan Sabtidii 31 August ka dhacay magaalada Kinshasa. Laga bilaabo maalintaas wixii ka dambeeyay, Jabhadda Midowgga Afrika ayaa gabi ahaanba ka baxday kalsoonidii iyo taageeradii siyaasadeed ee ay ka haysay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka Kongo Central. Sidaas darteed, FCC waxay ka codsatay walaacyada inay si dhakhso leh u soo gudbiyaan iscasilaadooda, ayaa lagu yiri bayaanka FCC ee uu akhriyay Michel Bongongo, ayuu qoray wargaysku.
(SM / BT / Haa)
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha ee Khamiista 29 Agoosto 2019 - Afrika
DRC: Dib u eegista saxaafadda Shiinaha Talaadada 3 Sebtember 2019 - Afrika